Ikhalenda Lunar kanye nezimpawu zodiacac
Wonke umuntu uyazi uphawu lwakhe lwe-Zodiac. Lesi yisimo se-Sun ku-horoscope yomuntu ngamunye. Kusukela ekubukeni kokubhula ngezinkanyezi, kunquma ukuthi umuntu usebenza kanjani. Noma kunjalo, eshadini lomuntu siqu lezinkanyezi, ngaphezu kwe-Sun, kunamaplanethi amaningi ayisishiyagalolunye. Ngamunye wabo uthinta i-horoscope. Siphakamisa ukuthi wazi ukuthi yini i-Jupiter ethi ngawe. Siyakubhala ikhalenda yenyanga kanye nezibonakaliso ze-zodiac.
Le phlanethi ibonisa uhlobo luni lomuntu oludonsela iziphetho nokukhiqiza, ukuthi amasu akhe angaba kanjani ezimweni ezinkulu nezincane, ukuthi uhlela kanjani, nokuthi yini engayithola ... Manje uzoba nethuba lokubona amaphutha akho ebhizinisi futhi ulungise isimo , kodwa futhi ukuqonda indlela yokwakha ubuhlobo nabalingani bebhizinisi: ngemuva kwakho konke, njengoba kwaziwa, into ebaluleke kakhulu ukuthola nokukhomba inkinga.
I-Jupiter ngesibonakaliso se-Aries
Kungakhathaliseki ukuthi umbuzo uwukuphi futhi kunoma yikuphi inkinga, isiphetho salowo muntu, njengombuso, ukuthi "kukhona okumele kwenziwe". Noma yini ehlelayo, kuzo zonke izinto azibheka ngamandla akhe kuphela. Ukucabangela ukuthi imibono yakhe ihambisana kanjani nesimo futhi iyamukeleka kwabanye, akahambanga ngokukhethekile. Amalungiselelo akhe awawunikeli induduzo, kodwa into eyinhloko ukuthi indaba kufanele ihambe (lapho-umbuzo wesihlanu). Umuntu angabumbanisa, ahole noma afundise okuthile ngesibonelo sakhe: "Yenzani nathi, yenza njengoba sikwenzayo, yenza kangcono kunathi!" Emathembeni asekude, kanye nokuhlangenwe nakho, ucabanga kancane . Isu lakhe likuvumela kalula ukunqoba impi, kodwa akusiyo njalo eyenzelwe ukunqoba impi.
I-Jupiter ngesibonakaliso se-Taurus
Kungakhathaliseki ukuthi umuntu ucabangani, isiphetho esiyinhloko sizoba ukuthi konke okudingekayo kakade kukhona futhi akudingeki ukuphikisana. Isu eliyinhloko ekhalendeni yenyanga kanye nezibonakaliso zezinkanyezi ukwenza okungcono kakhulu okutholakalayo. Uhlela kakhulu futhi ephelele, ebala zonke izinsiza. Akathandi ukusindisa, akholelwa ukuthi ohluphekayo ukhokha kabili. Uma omunye umuntu ezuza kulo, uyojabula futhi uzoyibeka esikhwameni sakhe. I-Conservative futhi iqiniseka ukuthi i-oda elikhona lezinto lilungile. Awuqondi ukushintsha nokuhlolwa. Kodwa-ke, uma kukhona okumbangela ukuba angabaze ukungahambi kahle nokuvikeleka kukho konke ayejwayele ukukulindela, kungaba ukuwa ngokuphelele kwezwe kuye. Khona-ke uzoqala konke kusukela ekuqaleni, "futhi futhi ngokuthembeka." Futhi kunjalo nokubuyisana. ULenin wayeneJupiter eTaurus.
I-Jupiter ngesibonakaliso se-Gemini
Ukuphindaphinda kwakhe: kunamathuba amaningi kanye nezinketho eziningi, futhi konke kuyathakazelisa. Leli yicebo: udinga ukufunda konke bese uzama konke. Ejabule ngombono othile (njengomthetho, hhayi owakhe), uyakwazi ukuqala ukugijimela naye, njengoKrushchev enommbila. Imaminithi emihlanu lo muntu "uzobona kahle indlela ezayo esikhathini esizayo," futhi ngisho nangalesi sikhathi omunye umuntu angamkholisa umuntu. Wabe esewugudluza futhi ashintshe kwenye into. Ulungele ukwamukela amaphutha, cabanga ngamathuba, sungula uphinde uzame futhi ...
Jupiter ngesibonakaliso seCanscer
Kumuntu onjalo, okulandelayo kusobala. Yonke into efana nayo, futhi ngenye indlela ngeke ibe yikho, noma yini oyenzayo, ngakho-ke ungenza noma yini, noma yini noma ungenzi lutho - ngokwengqondo yakho. Eqinisweni, izwe aliyona into embi kakhulu, nakuba-ke, akuyona into ethakazelisayo ngokukhethekile. Umuntu onomdlavuza we-Jupiter ku-snob yemvelo: owanelisekile, ongafuni ukwazi, othanda ukufundisa abanye ngemisho evela kusigaba esithi "intambo iyinkolo elula," futhi uphumelele kulokhu, ngoba akunakwenzeka ukuphikisana naye, akukho lutho nento engayenza. Isu lakhe lokuphila liwukuthi uhlala, njengoba ephila, futhi ngezinye izikhathi isithukuthezi siqala ukugqoka ngandlela-thile: uthi, angifuni amaqanda, ngifuna amaqanda ama-quail. Njengoba ukugqoka kwakhe cishe kungashintshi ngokuyisisekelo, kaningi uphumelele kuyo, okwenza kube mnandi nakwegunya lakhe.
Jupiter ngesibonakaliso sikaLeo
Azikho izinkinga ezincane kulo muntu. Kusobala kuye: awukwazi ukuhlala unganaki lutho futhi awukwazi ukuphumula. Uma ungenzi lutho ngesimo, khona-ke isimo sizokwenza okuthile nawe, futhi, ngendlela engafanele. Ngakho-ke, isu lakhe: kufanele usinde nganoma yikuphi ukubiza. Uphendvula njalo umbuzo: "Indlela yokuphila?" Akanayo imibono yokudlula. Amalungiselelo akhe - ngisho nalawo angathí sina - yingqikithi yazo zonke izinto ezenzeka kuye empilweni, nokuthi yini angathanda ukuyenza esikhathini esizayo. Emibonweni yakhe kukhona indawo yonke nonke. Awunayo izixazululo zendlela. Ngamanye amacebo akhe kucatshangwa kuze kube yilapho kunqotshwa komqondo wakhe kanye nokuqedwa kwamathuba onke okuphindiselela engxenyeni yamandla abhubhisa ikhalenda yenyanga kanye nezibonakaliso zezinkanyezi. Konke lokhu kubonakala kunesihe futhi kusakazekile, "ukubiza abantu ku-feat."
I-Jupiter ku-Virgo uphawu
Ayikho inkinga enjalo engayiqondi ngokuningiliziwe. Uzosho ukuthi izwe liyinkimbinkimbi, azikho izinyathelo kulo, futhi yonke into iyasiza endaweni yayo. Into eyinhloko kuye kuyasiza futhi kuyadingeka ngaso sonke isikhathi. Ukuphumelela kwakhe kunezinzuzo eziningi ezincane, amakhono kanye nokufaneleka. Uma ekwakha amapulani noma edala amaphrojekthi, ke kubalwa emidwebo yesikhomba ngasinye kanye nokulinganisa usuku ngalunye. Akalokothi akhombise lokho yena ngokwakhe ongazange ahlole. Iqiniso lokuthi ufunde kahle, uyakwazi ukufundisa noma ubani. Ngamanye amazwi, uPeter I.
Jupiter ngesibonakaliso seLibra
Kulowo muntu oneJupiter eLibra, kusobala ukuthi kukhona okwenzekayo nxazonke, futhi konke kufanele kwenziwe ngendlela efanele, ukuze, uNkulunkulu angavumeli, akukho ukuphikisana nokuphikisana, kodwa, ngokuphambene nalokho, kusekelwa njalo kungaba ukuthula, ukuthula nokuhleleka. Isu lakhe lukufanisa isimo, ngakho imibono yakhe kanye nezinhlelo zakhe zibukeka zithembekile ukuze zihloniphe futhi, njengomthetho, zamukelwa ngabanye. Futhi, naphezu kokubonakala kwabo okungabonakali, ukuphumelela kwangempela kwalemibono ngezinye izikhathi kuhle kakhulu. Ikakhulu uma umgqugquzeli emele umgomo omkhulu, futhi nalena umnikazi weJupiter eLibra uhle kakhulu.
I-Jupiter ngesibonakaliso se-Scorpio
Kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani kuye, umuntu ophethe i-Jupiter ku-Scorpio uhlale ecacile ukuthi yonke into iyingozi futhi ungalindela noma yini, ngoba ekugcineni umhlaba wonke uyinhlamba futhi abantu abasiwo isipho noma. Ngakho-ke, isu elibalulekile lomuntu wukuthi kufanele uhlale uphapheme, wenze ngokucophelela, ungaxhomeki kakhulu, futhi yini, ulondoloze futhi ulondoloze "uma kwenzeka impi yenuzi". Ngakho-ke, yonke i-kopeck nayo yonke inhlangano yomphefumulo nomzimba kufanele ihlelwe ukuze amandla anikwe amandla. Uma udinga ngempela ukuvuka ebhedeni, ngesikhathi esisodwa, nokuhlanza okujwayelekile ukukwenza, kanye nesithandwa sokumanga, nokusekela ekhaya ekhaya. Kodwa kungcono, nakanjani, futhi futhi ngenxa yesikhwama sokungaqhubeki ngaphandle: akunjalo ukuthi ...
I-Jupiter ngesibonakaliso se-Sagittarius
Kungakhathaliseki ukuthi umbuzo uwuphi, futhi noma yikuphi inkinga, umuntu ophethe i-Jupiter ku-Sagittarius uhlale ecacile kulo lonke, akuningi okucabange ngakho, asikho isidingo sokungena emininingwaneni ngokujwayelekile, angakwazi, kodwa akaphoqelekile. Isu lakhe lokuphila lilula futhi lihle: "Ngiyinyoni mahhala, lapho ngifuna khona-ngiyagibela lapho, nginelungelo." Akaboni imigomo engatholakali kanye nezintaba ezingenakunqotshwa. Kufanelekile ukubamba umlilo, futhi uzohamba ngezinyawo waya eNtabeni i-Everest ngokusebenzisa iNingizimu Pole futhi uzokhohlisa isixuku sabafundi nabalandeli. Futhi ukulinganisa komcabango wakhe, kwanele ukuhamba nokuletha, uma, amamori ahlukene kuphela angeke amphazamise amehlo akhe.
Jupiter ngesibonakaliso seCapricorn
Kusukela kunoma yikuphi amaqiniso nezimo, lo muntu uyakwazi ukuphetha isiphetho: bathi ibhizinisi liyinkimbinkimbi, izimo zinzima, azikho amathemba kunoma ubani, ngaphandle kweyakho kanye namandla ethu. Ngakho-ke, uzama ukungenzi amalungiselelo, kodwa ukuhamba ngamaqiniso atholakalayo emehlweni akhe futhi uthinte ngalesi sikhathi esithile. Kudingeka senze okudingekayo okwamanje, futhi akukho lutho lokucabanga ngakho, "ukholelwa. Omunye ngandlela-thile ukukholisa, akeke ufundise, kuye ngokusemthethweni akuyona into ekhethekile. Kodwa-ke, uma kunesidingo esinjalo, izincazelo zakhe zibonakala zikhonkolo, zibonakala futhi zikhulu kakhulu kuphela ukuthi izithulu nezisimungulu azikwazi ukukhunjulwa. Ngamagama, uMfundisi omkhulu, Jawaharlal Nehru.
Jupiter ngesibonakaliso sika-Aquarius
Kungakhathaliseki isimo, kusobala kuye: ungalindela noma yini, kodwa ngokuqondile konke lokhu akuthinti yena, ngakho awukwazi ukuzilimaza. Isu lakhe lokuphila kufanele lilungele noma yini, futhi ukholwe okusemandleni akho. Akukho lutho oluvimbela yena, indlela yokuthuthukisa inkolelo yanoma yiliphi ithuba elilodwa, futhi alenze libe lihle. Ukuvumelanisa zonke lezi zimpikiswano zibe yiqiniso ukuthi umuntu onjalo akahle kakhulu.
Jupiter ngesibonakaliso sePisces
Lo muntu kunoma yisiphi isimo, kusobala ukuthi akukho lutho olungasho nakanjani, futhi akekho omele abe nokuthile okushoyo, kodwa amathuba - ngisho nangaphezulu. Ngakho-ke, kungenzeka ukuba uphumule, ngandlela-thile konke kuzozixazulula, "akukaze kwenzeke ukuthi kwakungekho neze." Njengoba kungenakwenzeka ukuphikisana nesimo esinjalo, ngezinye izikhathi kungaba negunya lomuntu wendawo kanye nombusi onemibuzo yento engadingekile futhi engenamsebenzi. Isu lokusebenzisa izinhlelo zakhe lihle futhi alihambisani nalokhu: ungaphazamisi izenzakalo, futhi ngokuhamba kwesikhathi konke okuzokwenza kube yile ndlela okufanele kube ngayo. Ngokuvamile, yilokho okwenzekayo.
Amaphupho ayisiprofetho: iqiniso neqiniso
Owesifazane, owesilisa oshayayo - ukuthi bahlangana kanjani ndawonye
I-Horoscope: Unyaka we-Tiger ngenqama
Iziqhingi ezingabhalwanga emhlabeni ongazithenga
Okusheshayo amazambane ukhilimu ukhilimu
U-Pelageya akafihli inveli yakhe nomdlali weHockey u-Ivan Telegin
Okudingayo ukuze udle ukuze ukhulelwe
Ekuphakameni kwendabuko indoda iyalala
Uma indoda ifuna ukusondelana nowesifazane
Imisebenzi yabesifazane besifazane
Indima kababa emndenini wengane
I-oat flakes ikhekhe
Indlela yokuwa othandweni nendoda ene-gait eyodwa